क्युबामा पुष्कर शाहको उधारो सम्भोग - Everest Dainik - News from Nepal
क्युबामा पुष्कर शाहको उधारो सम्भोग
बजारको सातदोबाटोमा हजारौँ मान्छेको भीड लागेको छ। भीडमाझ मेरो साइकल उभिएको छ। दोलखा भीमसेनको दर्शन गरेर आउँदा भीडभित्रको मेरो साइकलसामु म आफैं पुग्न सकिनँ। मेरो साइकललाई मान्छेहरुले अचानक बजारको चोकमा निस्किएको सिनेमाको वास्तविक नायकलाई झैँ घेरेका छन्। छुन मन लागेजस्तो गरी त्यतापट्टि हात तन्काउँदै फेरि तान्दै गरिरहेका छन्। साँच्चिकै सिनेमाको नायक भएको भए सेलिब्रिटी बनेको मेरो साइकलले ती मान्छेहरुका हात, ओठ, गाला र छातीतिर कति अटोग्राफ दिँदो हो!
दौरा–सुरूवाल, ज्वारी कोटमाथि भादगाउँले टोपीमा सजिएको म कुनै गाउँ विकास समितिको अध्यक्षभन्दा कम देखिएको छैन।
भीड हटाएर कसैले मलाई साइकलछेउ पुर्‍याइदियो। जिल्लाका सबै कार्यालयका प्रमुखहरु पनि उपस्थित थिए। पन्चे बाजा घन्किरहेको थियो। नगरप्रमुख चोकबहादुर दाहालले टीका लगाएर यात्रा शुभारम्भ गरिदिए। अघि–अघि पन्चे बाजा अनि पछि–पछि लागेको भीडभित्र म। लाग्थ्यो, यो कुनै साइकल यात्रा नभएर कुनै जन्तीको हूल हो। बेहुला घोडा नचढेर साइकलमा चढेको छ।
सदरमुकाम चरिकोटबाट मेरो गाउँ मकैबारी पुगुन्जेल थुप्रै ठाउँमा स्वागतका घडा राखिएका थिए। गाउँमा त भाइहरुले विदाइद्वार पनि बनाएछन्।
“तिमी फर्किँदासम्म त हामी मरिसक्छौँ होला!”
गाउँका आफन्तहरुले आफ्नो उमेरको अन्दाज गरेर रोदनमिश्रित आवाजमा भनिरहेका थिए। कति जना त घुँक्कघुँक्क गरिरहेका पनि थिए।
मैले सम्झाएँ, “संसारको कथा सुन्नलाई तपाईँहरुले मलाई पर्खिरहनुपर्छ।”
बिछोडको पीडाले भावुक बनाइरहेको थियो सबैलाई। गाविस अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहले आँसु चुहाउँदै विदाइको माला पहिर्‍याइदिए। गलाभरि माला पहिर्‍याइएको म निर्वाचन जितेको ठूलै नेताजस्तै बनिरहेको थिएँ।
मलाई बिदा गर्न बालकदेखि वृद्धसम्म गाउँको सिमाना चरेङ खोलासम्म आए। रून नजानेजसरी सबै मलाई एकतमासले हेरिरहेका थिए। अब भेट होला/नहोला भन्ने सुर्ता थियो सबैमा। म पनि चुपचाप उनीहरुलाई सम्झाइरहेको थिएँ, “म कुनै युद्ध मैदानमा जान लागेको होइन, जहाँ मेरो मृत्यु निश्चित छ। म शान्तियुद्धमा हिँडिरहेछु। जरुर एक दिन गाउँ फर्किन्छु, जहाँ मेरो माटो छ, मेरो सास, आश र विश्वास छ। उकाली–ओरालीहरु छन्। वनपाखाका लालीगुराँस र लालुपाते छन्। डाँफेको वेग छ। दौँतरीहरु छन्। बुद्धभूमिको शिर सगरमाथा छ। त्यसको काखमा मेरो गाउँ छ। गाउँमा मेरो घर छ। मेरी आमा छिन्। मैले आमाको आशीर्वाद पूरा गर्नु छ। गाउँ फर्किएर आमालाई भन्नु छ, ‘मैले तिम्रो आशीर्वाद शिरोपर गरेँ। मैले संसार जितेँ। मसँगै जोडिएको तिम्रो सपना पूरा गरेँ।”
चरेङ कटेपछि बाटो उकालो लाग्यो। बिदाइमा हल्लिरहेका हातहरु खाखिनेको उत्तिसघारीले छेकिए।
यात्राको पहिलो पाइला नै कस्तो उकालो! बोच, खरीढुङ्गासम्मै ठसठस कन्दै चढेँ। मुढेको ओरालो चार किलोमिटर तल झरेपछि तमाखुबारीमा विवाह गरेर गएका मेरा माइली दिदी र साइँली बहिनीले रूँदै बिदाइका हातहरु हल्लाए।
पानी झमझम पर्न थाल्यो। साइकल कतै रोकिएन। खाडी चौर पुगुन्जेल साइकलको आधा ब्रेक खिइसकेको थियो। कृष्ण राउतले दिएको क्यामेरा एक क्लिक नलगाई म जस्तै रूझेको थियो।
यहाँ रूने आँखाहरु नभए पनि सोझाएँ साइकलका पाङ्ग्राहरु काठमाडौं तिर।
स्पेनमै बसेका बेला बेनिडोर्मदेखि दश किलोमिटर टाढा आल्तेमा एक जना नेपालीको बच्चाको पास्नीमा निम्तो मान्न साँझ पुगेको थिएँ। पास्नीको कार्यक्रम मध्यरातमा मात्र शुरु भएको थियो। पास्नी खाने बच्चा स्वतन्त्र भए पनि उनका बाबुआमा स्वतन्त्र थिएनन्, कामका कारणले बच्चा वा आफ्नै यस्ता कुनै उत्सव मनाउनुपर्दा मध्यरातै कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो। आज छोरीको पास्नीमा पनि त्यही नियति भोग्नुपरेको थियो उनीहरुले। यस्तै उत्सव वा पर्वहरु मनाउन नपाउँदा मात्रै मान्छेहरु आफ्नो मातृभूमि छाडेकोमा थकथकाउँदा हुन्।
पास्नीमा नेपालका नाम चलेका म्याराथन धावक भेटिए, अक्कलबहादुर बोहोरा! उनी नेपालका होनहार धावक थिए। सबैभन्दा रमाइलो कुरा त के भने नि, उनी मेरै प्रेरणाले म्याराथन धावक बनेका रैछन्। त्यो कुरा मैले निकै अघि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको थिएँ। सशस्त्र पुलिसको एउटा सिपाही कसरी पुष्कर शाहको प्रेरणाले नेपालको चर्चित धावक बन्यो होला? उनको कथा पनि कम रोचक रैनछ। मेरो बारेमा पत्रपत्रिकामा छापिएको पढेर उनले अठोट गरेका रैछन्, “पुष्कर शाह आमाले दिएको एक सय रूपैयाँ बोकेर विश्व साइकलयात्रा गर्न सक्छन् भने म एउटा सिपाही मान्छे, महिनाको चार–पाँच हजार तलब पाउँछु, किन धावक बन्न सक्दिनँ?”
यही दृढ सपनाले उनलाई आफ्ना खुट्टाहरु दह्रो बनाउन प्रेरणा दियो, छातीलाई आँधी रोक्ने पहाड बनाउन बल प्रदान गर्‍यो अनि आत्मालाई युद्धमा नहार्ने सिपाही जस्तो आँटिलो बनाउन ऊर्जा थप्यो रे! यसरी म्याराथन धावक बनेका अक्कलबहादुर बोहोरा नेपालमा मात्रै होइन, विश्वका धेरै प्रतियोगितामा सहभागी भए। कैयौँ दौड पूरा गरे, कैयौँ दौड जिते।
उनको सानो गाँठीको पातलो शरीर देखेर धेरैले उनलाई व्यङ्ग्य पनि गर्थे रे— उनी दौडने होइन कि अरु दौडेको हावाले उनलाई धकेल्छ भनेर! एक पटक पेरिस म्याराथनमा भाग लिन आएको बेला उनी दौड पूरा गरिसकेपछि नेपाल जाने बाटो भुलेर स्पेनतिर झरेछन्। त्यसपछि उनको दौड रोकिएको छ, सपना फेरिएको छ। उनी एउटा रेस्टुरेन्टमा भाँडा टल्काउँछन्।
मसँग वियरको चिसो गिलास ठोक्काउँदै अक्कलबहादुरले सोधे, “दाइ, तपाईं जापान पनि पुग्नुभो है?”
“पुगेँ नि!”, मैले उनीसँग चियर्स गरेँ।
“अमेरिका नि पुग्नुभो है?”, यो प्रश्न सोध्दा उनले एकसासमै वियरको गिलास आधा पारिसकेका थिए र थपेका थिए, “कस्तो रैछ अमेरिका?”
“तपाईं अमेरिका पुगेको मान्छे फेरि किन फर्केर आउनुभएको?”
भन्न त मन थियो, मलाई तिम्रो जस्तो सपना बदल्नु थिएन, त्यही भएर अमेरिका बसिनँ। तर फिस्स हाँसिदिएँ मात्र।
हामी लगातार गिलास भर्दै जान्छौँ, त्यो भीडमा मलाई अक्कलबहादुरले मात्रै होइन, अरु थुप्रै वियर र ह्विस्कीका गिलासहरुले पनि थुप्रै प्रश्नहरु सोधिरहन्छन्।
यदि म जापानमा साइकल फालेर बसेको भए वा अमेरिकामा पुगेर पासपोर्ट च्यातेको भए आज मलाई यी अक्कलबहादुरहरुले यस्ता प्रश्न सोध्नै पाउने थिएनन्। आज म नेपाली सञ्चार माध्यमहरुमा अन्तर्वार्ता दिने हैसियतको हुने थिइनँ।
मैले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता नदिएको भए अक्कलबहादुरले मेरो अन्तर्वार्ता सुन्न पाउने थिएनन् अनि उनले मेरो प्रेरणा पाउने थिएनन्। मेरो प्रेरणा नपाएको भए उनी एउटा म्याराथन धावक बन्ने थिएनन् अनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तक्माहरु घाँटीमा झुन्डाउन पाउने थिएनन्। पेरिस आइपुग्ने थिएनन्। पेरिसबाट नेपाल फर्किने बाटो भुलेर स्पेनतिर झर्ने थिएनन्। मेरो देशको गौरवले विदेशी रेस्टुरेन्टमा भाँडा टल्काउने थिएनन्। हप्ता वा महिनाको अन्तिम दिन युरोपको मुठो गन्ने थिएनन्। उनी एउटा सिपाहीमा मात्र दरिन्थे। स्वास्नी र छोराछोरीका सपना पूरा गर्न सक्ने थिएनन्। आफै“ पनि कति छाक त भोकै सुत्ने थिए तर एउटा सच्चा देशभक्त सिपाही भने बनिरहन्थे, अक्कलबहादुर बोहोरा!
अब दुइटीले नै मलाई मुसार्न थाले। ममा उत्तेजना शून्य बराबर थियो। दुइटी भोकाएका सिंहिनी जस्तै देखिएका थिए। उनीहरु ‘ब्रा’ मा उत्रिसकेका थिए। एउटी मेरो पाइन्टमाथि तिघ्रामा चढी। अर्कीले पछाडिबाट आफ्ना दुई जाँघबीचको यौनाङ्ग मेरो ढाडमा दलिरहेकी थिई। सिनेमामा हिरोइनले हिरोको छातीमा समाएजसरी पछाडिबाट समाइरहेकी थिई घरीघरी।
तिघ्रामा चढेकीले दश डलर मागी। मैले ‘पैसा छैन’ भनेँ। पत्याइन। फेरि गालामा म्वाइँ खाई। पछाडिकीले काँध सुमसुम्याउन थाली। मैलै ‘साँच्चिकै पैसा छैन’ भन्दै खाली वालेट देखाएँ। उनीहरुले बल्ल पत्याए। उनीहरुले ‘मनाना’ अर्थात् ‘भोलि’ भने। मैले हुन्छ भनेँ र जुरूक्क उठेँ। उनीहरुले मलाई फेरि लडाए र भने, “पैसा भोलि दिए हुन्छ।”
उनीहरुले उधारो सेक्स गर्न आग्रह गरे। म ‘मनाना’ भन्दै लुगा लगाएर त्यहा“बाट निस्किएँ।
ट्याग्स: Cuba Sex, Pushkar Shah